Teruel မှရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်အနက်ရောင်ထင်းရှူးပင်ကိုအန္တရာယ်ပြုသည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အဘယ်သူ၏သိပ္ပံနည်းကျအမည်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်ထင်းရှူးပင် Pinus uncinata ဖြစ်သည်၎င်းသည်နွေရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတို့တွင်အပူချိန်မှာနူးညံ့ပြီးကျန်နှစ်၏ကျန်ကာလတွင်အအေးများသည့်တောင်တန်းများအတွက်ပုံမှန်ပုံသဏ္iferာန်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများသည်စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ တာရယ်ရယ်လ်ရှိ Sierra de Gúdarတွင်တွေ့ရှိရသည်။
သို့သျောလညျး ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ဤလှပသောမျိုးစိတ်များကိုအခြားတစ် ဦး အားခွင့်ပြုစဉ်ခြိမ်းခြောက်သည် Pinus sylvestrisပိုမိုကောင်းမွန်သော Albar pine သို့မဟုတ် scots pine ဟုလူသိများသော၊ ပိုမိုပူနွေးသောရာသီဥတုရှိသည့်ဒေသများအတွက်ပိုမိုအစားထိုးသည်.
ဥရောပရှိတောင်ဘက်စွန်းဆုံးထင်းရှူးပင်သည်အနက်ရောင်ထင်းရှူးပင်သည် Sierra de Gúdarတောင်တန်းများတွင်ခိုလှုံခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးရုက္ခဗေဒပညာရှင်များဖော်ပြခဲ့သည့်နေရာဖြစ်ပြီးယနေ့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနေသည်။ ၎င်း၏လူ ဦး ရေကိုနျူကလိယနှစ်ခုဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ ၁၉၀၀ နှင့် ၂၀၂၈ မီတာကြားရှိPeñarroyaအထွတ်အထိပ်အရဟက်တာ ၄၀ ခန့်နှင့်အခြား Alto del Conventillo ဒေသရှိဟက်တာ ၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။.
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုပျော့ပြောင်းစေတယ်ဆိုရင်၊ Pinus sylvestris အားဖြင့်မြေပြင်ရလိမ့်မယ် Pinus uncinata ဖြစ်သည်၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုရှိသည့်ဒေသများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရုံသာမကတိုးတက်မှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောအနက်ရောင်ထင်းရှူးပင်များ၏လူ ဦး ရေကိုလျော့နည်းသွားစေသည့်အလွယ်တကူမျိုးစပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအချက်ကိုရှောင်ရှားရန်၊ အာရာဂွန်အစိုးရကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရေး ဦး စီးဌာနမှပညာရှင်များသည် GPS ဖြင့် အသုံးပြု၍ ထင်းရှူးပင်သစ်တောကိုမြေပုံထုတ်ပြီး၎င်းတွင်နေထိုင်သောအပင်မျိုးစိတ်အားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ထင်းရှူးပင်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် သစ်တောစီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်၎င်းတို့၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အစီအမံယူပါပြီ ပြည်သူ့ Utility ကို၏တောင်တန်း၌တည်၏။
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စ၍ စပိန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ဥရောပယူနီယံ၏ Natura 1992 ကွန်ယက်တွင်ပါဝင်သည်၊ ၎င်းသည်အာရာဂွန်အစိုးရမှကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရအနက်ရောင်ထင်းရှူးပင်သည်»တစ် ဦး biogeographic ကျောက်မျက်»ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » Teruel မှရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်အနက်ရောင်ထင်းရှူးပင်ကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်